Fayraska 'Coronavirus' ayaa ruxaya suuqa wax soo saarka | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Coronavirus wuxuu ruxayaa suuqa badeecada
Casudi casals | | Bolsa, Crisis
Tan iyo markii uu yimid Coronavirus, suuqyadu waxay bilaabeen inay ku dhacaan hubaal la'aan, cabsi iyo isweydaarsi, taas oo ka tagtay qol yar oo aan la kulmin waxyeeladiisa. Shirkado badan ayaa arkaya waxtarkooda oo waxyeellay. Qaar ka mid ah waxay ka hadlaan in la qarameyn karo si looga fogaado musalafnimadooda, iyo kuwa kale ee lala xiriirinayo alaabta ceyriinka ah nasiib yar ma heystaan.
Kahor intaanuu faafin cudur faafin, iyo xitaa kahor intuusanba jirin, suuqa badeecadaha ayaa durba marayay daqiiqad xoogaa u gaar ah. Iskusoo wada duuboo, tan biraha qaaliga ah, iyo qaar fure u ah soo saarida wax soo saarka, sida palladium, ayaa loo isticmaali jiray in lagu sameeyo gawaarida gawaarida, qalabka wax lagu xiro, iyo aaladaha elektarooniga ah. Si kastaba ha noqotee, xiisadaha ka dhex jiri kara USA iyo Shiinaha, waxay horey u kordhiyeen qiimaha qiimaha caanka caanka ah iyo "isku mid ahaanta", dahab iyo qalin. Laakiin xaggee baan runtii u soconnaa?
1 Dahabku wuu sii xoojinayaa, laakiin dib ugama laabanin sii kordhisiisa
2 Shidaalku qiimo ayuu ku fadhiyaa wuxuuna qarka u saaran yahay inuu burburo
3 Badeecadaha la xiriira quutal daruuriga
Dahabku wuu sii xoojinayaa, laakiin dib ugama laabanin sii kordhisiisa
Markii ugu dambeysay ee dahabku ahaa qiyaastii $ 1.700 ounce, waxay ahayd dhammaadkii 2012. Tan iyo markaas, dib u soo kabashada suuqyada iyo dareenka maalgashadayaashu waxay sii wadeen inay dib ugu riixaan hareeraha $ 1.000 halkii ounce dhamaadka sanadka 2015. Brexit, oo ay weheliso qaar ka mid ah dhibaatooyinka dhismaha ee aagga euro, iyo dhacdooyinka qaarkood ee dhacay sanadaha soo socda, ayaa u horseeday inay gaarto qiyaas kudhowaad $ 1.300 sannadaha soo socda.
Dhinaca kale, xiisadaha labada quwadood, USA iyo Shiinaha, waxay bilaabeen inay ka careysiiyaan kororka tartiib tartiib ah qiimahiisa. Sannadkii 2019, dahabku wuu jebiyey caqabaddaas oo wuxuu ku guuleystey inuu kaco qiyaastii $ 200 ounce, isaga oo dhigaya birta qaaliga ah qiyaastii $ 1.500. Oo markay u egtahay in heshiis la gaadhayo, oo suuqyadu "u muuqdeen" inay bilaabeen inay dejiyaan, fayraska 'Coronavirus' wuxuu ku riixay ounce ka sareeya $ 1.700. Sidoo kale, leh isbeddel sarreeya, sida qaybo badan. Hagaag, Talaadadan waxaan aragnay ounce waxyar kadib markii uu gaaray $ 1.800, halka jimcahan ay ka ganacsanayeen ku dhowaad $ 100 kayar.
Xagee tan na geynaysaa? Dhibaatadii 2008 waxay u horseeday dahabku inuu sii wado kor u kaca sannadaha soo socda. Taasi maahan sababta fikraddaas loogu kordhin karo Coronavirus, maaddaama xiisaddaas ay ka jirtay nidaamka maaliyadeed. Si kastaba ha noqotee, dhibaatadani waa caafimaad, waxayna saameyn ku yeelatay qaybo badan iyada oo lagu soo rogay karantiillo, xannibaadyo, iyo xannibaadyo ganacsi oo saameeya silsilado wax soo saar oo kala duwan. Dhinaca kale, waxa hubaal ah in bangiyada ay bilaabeen inay "daabacaan" lacagta, taasoo mar alla markii ay wareegeyso ay tahay "inay kordhiso qiimaha hantida. Iyadoo la tixgelinayo kiiskan, in dhibaatada Coronavirus-ka ay tahay mid aan wali dhammaan, iyo in dawladuhu ay weli ka fekerayaan sidii ay hawsha ugu bilaabi lahaayeen si tartiib tartiib ah, waa in la arkaa dib-u-qiimeynta birta.
Shidaalku qiimo ayuu ku fadhiyaa wuxuuna qarka u saaran yahay inuu burburo
Haddii wax si fiican u fiicnaayeen casaanka, waa qaybta saliidda. Markii waxsoosaarka saliida uu horey u gaaray diiwaanka bishii Ogosto ee Ciraaq, iskuday lagu joojinayo hoos u dhaca qiimaha Sucuudiga iyo Ruushka ayaa maalmo ka hor heshiis gaadhay si loo joojiyo dhiigbaxa. Gaar ahaan, iyo kadib kulan deg deg ah oo ay laqaateen OPEC, way ogolaadeen wax soo saarkiisa ku jaray 20 milyan oo foosto halkii maalin. Heshiiskan wuxuu sababay rikoor sare maalin keliya shidaalka, halkaasoo xitaa uu ka kacay wax ka badan 40%.
Si kastaba ha noqotee, Coronavirus wuxuu eedeynayaa isticmaalka saliida ee hooseeya, mana jirto meel u badan oo lagu keydiyo. Haamaha, dhuumaha iyo godadka dhulka hoostiisa mara ayaa gaadhaya xadka ay leeyihiin. Wakaaladda Caalamiga ah ee Tamarta (IEA), ayaa toddobaadkan daabacday warbixin ay ku soo gudbineyso sida meela badan ayaa gaadhay xadka ay leeyihiin. Waxaa sidoo kale la arkay sida saameynta faafa ay u keentay hoos u dhac 25% ah baahida saliida. Ka socda qiyaastii 100 milyan oo foosto maalintii ilaa 75 milyan.
Haddii koofiyadaha wax lagu keydiyo si ballaaran loo gaaro, bamgareynta saliidda waa inay istaagtaa. Burburkaasi wuxuu ku riixi karaa qiimaha foostada xitaa heerar hoose oo aysan fileynin inay arkaan. Dhammaan walwalkaan weyn waxaa loo wareejiyay suuqyada aan ku aragnay a Brent Oil waxay ku dhowdahay $ 28 halkii Foosto, halka WTI Oil ay ku dhowdahay $ 18 Jimcahan, Abriil 17.
Dhamaan shirkadaha shidaalka ayaa saameyn ku yeeshay. Repsol, Royal Dutch Shell, Exxon Mobile, Total… Haddii suuqu soo kabto, aafada ayaa hoos u dhaceysa, dhimista wax soo saarkiisuna wuu dhaqan galayaa, waxay noqon kartaa mid xiiso leh in boosas la qabsado. In kasta oo maanta wali ay jiraan waqtiyo adag oo soosocda, aakhirkiina ay ku dhacaan qiimaha dahabka madow iyo shirkadaha taxan, la yaab ma noqon doonto in la arko.
Badeecadaha la xiriira quutal daruuriga
Dhammaantood kuma dhicin suuqyada alaabta ceeriin. Qaybaha wax soo saarka cuntada tusaale ahaan, Mid ka mid ah maaddooyinka sida aadka ah u kordhay bishii Maarso wuxuu ahaa "Casiirka Liinta". Mid ka mid ah sababaha ayaa si sax ah u ahaa Faytamiin C, waana in cudurka faafa ee fayraska ahi uu kiciyey isticmaalkiisa markii la ogaa waxyaalaha faa iidooyinka badan leh ee uu jidhka u leeyahay.
Sadar la mid ah cunista Casiirka Liin dhanaanta waxaan ka helaynaa Kafee. Cunitaanka kafeega ayaa sidoo kale la xoojiyay maadaama isticmaalkiisa si aad ah loo dalbaday iyada oo ay sabab u tahay karantiilka iyo saameynta ay dadka ku leedahay Coronavirus. Xaaladdan oo kale, kororkeedu wuxuu ahaa qiyaastii 15%.
Burka iyo Qamadiga ayaa sidoo kale arkay dalab kordhay sida alaabada lagama maarmaanka ah, kor u qaadista qiimahooda ku dhowaad 12 iyo 8% siday u kala horreeyaan. In kasta oo tani ay u egtahay inay khatar tahay in la yiraahdo, kororka cunnada alaabta ceyriinka ah kuwan oo kale waxaa dhiirrigelin kara dhacdooyin walaac ah oo dhowr qof la quudiyo. Si kastaba ha noqotee, sheegashadani waxay noqon kartaa mid khaldan illaa xad, maadaama qaar kale ay si xun u waxyeelleeyeen. Tusaale ayaa laga heli karaa Corn, halkaasoo bishii Maarso uu ku dhacay kuna dhacay qiyaastii 20%. Tusaalooyin kale oo dib u dhac ku yimaada badeecooyinka aasaasiga ah waxaa laga heli karaa sonkorta, kookaha ama qoryaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Bolsa » Coronavirus wuxuu ruxayaa suuqa badeecada
Suuqa iyo dhaqaalaha isbedelaya wixii ka dambeeyay masiibada Corona Virus ayaa sababay isbedel weyn oo ku yimid dalabkii alaabooyinka gacanta koowaad. Waxaan aaminsanahay in hantida ku xusan qodobkan ay ka mid yihiin kuwa ugu weyn ee ay saameysay dhibaatada adduunka.
Kordhinta baahida loo qabo badeecooyinka aasaasiga ah ee cuntada waxaa si weyn looga maqlaa wararka telefishanka caalamiga ah iyo wargeysyada qaranka, hase yeeshe ereyo kooban oo tilmaamaya kororka cunnooyinka xoojiya nidaamka difaaca ayaa aad u xiiso badnaa. Kordhinta baahida loo qabo casiirka liinta ayaa sidoo kale ka tarjumeysa sida macmiilku ugu wargaliyay waxtarkeeda nafaqo tan iyo, sidaan soo sheegnay, waxaa loogu cabiray Vitamin C-keeda.
Mawduuca aan soo sheegnay ee saliida ayaa ah mid aad u xiiso badan maadaama, lid ku ah kororka qiimaha badeecadaha dalabkoodu kordhay, qiimaha saliida ayaa si aad ah hoos ugu dhacay sababo la xiriira isticmaalkiisa oo yaraaday. Ma aysan tixgalinin dhibaatooyinka maqnaanshaha keydka shidaalka ay keeni karto hadii aan la iibin iyo sida deg degta ah ee ay ku dooneyso in lagu xaliyo dhibaatadan si dhaqaalaha saliida uusan ugu sii dhicin hoos u dhaca adduunka.
Macluumaadka khuseeya ee xiisaha leh ee ku saabsan isbeddelada qiimaha cudurka faafa awgood.
Ku jawaab Astrid Fernández
Sidee loo abuuraa qorshe hawlgab oo ku habboon?
Dammaanadaha madaxbannaanida Isbaanishka ee khatarta ku jira